FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA GOLDEN JACK RETRIEVER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Golden Jack Retriever
Alika mifangaro Jack Jack Ter Terre / Golden Retriever mifangaro
'Moe no zanak'alika mifangaro Golden Retriever / Jack Russell Terrier aseho eto amin'ny 5 volana. Lehilahy kely mamy sy milalao izy. Manana ny vatan'i Jack Russell izy ary ny tarehy sy ny rambon'ny Golden Retriever. Ny fifangaroana faran'izay kely hitako. '
Golden Jack Tertriever
Ny alika Golden Jack Retriever dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Jack Russell Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
mpiandry alika omby aostraliana mifangaro
'Moe ity amin'ny faha-9 volana. Manana ny vatan'i Jack Russell izy, mahia sy hozatra be. Fa ny tarehiny sy rambony ary volony dia an'ny Golden Retriever. Tena hyper sy feno hery izy, mafy loha (Jack Russell) fa avy eo nivadika snuggle ahy tia ahy ary andao hilalao haingana. Tanana vitsivitsy izy nefa tena tiany. '
Juno the Golden Retriever / Jack Russell Terrier afangaro alika atody 1 taona 'Juno dia mifangaro tanteraka amin'ny Jack Russell Terrier sy Golden Retriever. Manana angovo tsy manam-pahataperana any ivelany izy, saingy afaka mandry eo anilanao mandritra ny ora maro. Manana ny volombavany terery izy, fa ny palitao fotsy tsara tarehy misy volontsôma iray izay mandomando matetika rehefa mitady ny loharano rehetra. Mpianatra haingana izy ary mahafantatra tetika maro. Izy no alika tonga lafatra. '
Juno The Golden Retriever / Jack Russell Terrier mifangaro alika amin'ny 1 taona
firy taona ny turkeys no velona
Lisitry ny alika mifangaro Golden Retriever
karazana alika retriever labrador
cavalier mpanjaka Charles spaniel Info
fampahalalana momba ny zanak'ondry anglisy taloha
sarina omby marobe
mixer spaniel daschund sy cocker
alika no anjara coyote